डा. सूर्यप्रसाद सुवेदी नेपालको राजनीति संविधानसभा निर्वाचनको ढोकामा आइपुगेको छ । संसारका आंखा पुनः नेपालतिर तानिएका छन् । निर्वाचन सफल रूपमा सम्पन्न हुने र नहुने प्रश्नमा नेपालीको राजनीतिक भविष्यमात्र अडिएको नभई नेपाल राष्ट्रकै अस्तित्वको प्रश्न पनि जोडिएको छ । सुगौलीसन्धिताका नेपाल राष्ट्रलाई खतरा सात समुद्रपारको देशबाट थियो । ०७ सालको सेरोफेरोतिर त्यो खतरा दिल्ली आइपुगेको थियो । अहिले मुलुकभित्रै आइपुगेको छ ।
संविधानसभाले निर्णयगर्ने विषयमै एकपछि अर्को गरी सात दलले अदूरदर्शी तरिकाले निर्णयगर्न थाल्यो र थरीथरीका आन्दोलनकारीसंग सम्भव असम्भव सबैमा सम्झौता गर्न पुग्यो । अब त्यो प्रक्रिया अन्त्य गरी सबै आन्दोलनकारीलाई संविधानसभामा निर्वाचित भएर आउन र संविधानसभाबाटै समाधान खोज्न आह्वान गर्ने समय आएको छ । ‘आफू छारामा खुट्टा भारामा’ भनेझैं मुलुकले धान्न नसक्ने सबै अधिकार सबैलाई अहिल्यै चाहिएको छ । कोभन्दा को बढी क्रान्तिकारी हुने भन्ने अनुत्तरदायी वचकानापनले मुलुकमाथि समस्या थप्दै छ । अल्पविकसित राष्ट्रको आर्थिक विकास प्रमुख उद्देश्य हुनुपर्नेमा त्यही गौण भएको छ । देशको संवैधानिक र राजनीतिक संरचना विकासमुखी हुनुपर्नेमा समस्यामुखी भएको छ ।
-लेखक बेलायतको लिड्स विश्वविद्यालयका कानुनका प्राध्यापक र बेलायतका ब्यारिस्टर हुन् ।) साभार: कान्तिपुर १७ फेब्रुअरि २००८
This entry was posted on फ्रेवुअरी 17, 2008 at 3:40 अपराह्न	and is filed under Politics.
Tagged: अहिलेका राष्ट्रिय च�. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.